प’हिलाे प’टक शlरी रिक स’म्पर्क पछि यु’वतीहरु किन रु’न्छन्? य’स्तो छ कारण ! (भिडियाे सहित) - Samachar Post Dainik
प’हिलाे प’टक शlरी रिक स’म्पर्क पछि यु’वतीहरु किन रु’न्छन्? य’स्तो छ कारण ! (भिडियाे सहित)
शा-रीरिक सु-खभो’ग दुई व्यक्तिको बीचको स-म्बन्ध गाढा र प्रेम वृद्धि गर्न एक माध्यम हो । यसले सम्बन्धको घनिष्टता बढाउँछ र दुबै साझेदारहरूले खुशी र आ-नन्द पाउँछन् ।
तर धेरै महिलाहरु शा-रीरिक सु-खभो’ग पछि खुशी महसुस गर्दैनन्, बरु चिन्तित हुन्छन् ।धेरै महिलाहरु शा-रीरिक सु-खभो’गपछि रुन थाल्छन् ।
यदि तपाईं आफैंले यो अवस्था महसुस गर्नुहुन्छ र सोच्नुहुन्छ कि यो तपाईंसँग मात्र हुन्छ भने हामी तपाईंलाई बताउँछौं कि यो एकदम सामान्य समस्या हो ।
पुजाले आर्को प्रेमिका छ भन्दा आकाशले खाए य’स्तो कसम, झ’गडा पर्नुको का’रण यसरी खुलाए (हेर्नुस् भिडियो)
काठमाडौँ – कुनै केटीले तपाईंलाई मन पराएको थाहा पाउने तरिकाहरु। बिभिन्न माया-प्रेमका खोज तथा अनुसन्धानको ब्यापक अध्ययन गरी तपाईंहरु माझ यो लेख प्रस्तुत गरेका छौ । आफूले मन पराएको केटी रोज्ने र उनैसँग जीवन बिताउने सपना प्राय सबै छोरा मान्छेले देखेकै हुन्छन् । केटाले सकेसम्म केटीलाई आफूतिर आकर्षित गर्न आफ्ना कुरा गर्ने तरिका तथा आफू प्रस्तुत हुने तरिकाका बारेमा सजग हुनु जरूरी हुन्छ ।
भन्ने गरिन्छ महिलालाई चिन्नु असम्भव जस्तै कुरा हो रे । त्यसोभए महिलाको भावनालाई कसरी बुझ्ने त ? कोही केटीले आफुलाई मन पराइरहेको छ भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने ? मनोविज्ञहरुका अनुसार यस्ता केही तरिका छन् जसका आधारमा महिला आफुप्रति नतमस्तक भएको कुरा पुरुषले ठम्याउन सक्छन् । केटीले तपाईंलाई मन पराएको थाहा पाउने लक्षणहरु तल छन् । मनपरे share पनि गर्नुहोस्
१. असल मान्छेसँग तुलना यदि उनले कोही निकै राम्रो मान्छेसँग तपाइँलाई तुलना गर्छिन् भने वा कुनै असल मान्छेसँग तुलना गर्दै त्यो मान्छे ठ्याक्कै तपाइँजस्तै छ भन्ने गर्छिन् भने ढुक्क हुनुहोस्, तपाइँ उनको मनमा बसिसक्नुभएको छ ।
२. तुरुन्त प्रतिक्रिया दिएमा कुनै केटीले यदि तपाइँको मोबाइल म्यासेज, इमेल, टि्वट तथा फेसबुक म्यासेजको तत्कालै जवाफ दिन्छिन् । तपाइँको फोन कललाई बेवास्ता गर्दिनन् र फोन उठाउन नपाएमा माफी माग्दै लामो म्यासेज पठाउँछिन् भने बुझ्नुहोस् तपाइँले उनको मन पगालिसक्नुभएको छ ।
३. केटीका साथीहरुले तपाइँलाई साथी बनाउन खोजेमा यदि कुनै केटीले तपाइँलाई मन पराइन् भने त्यो उनका साथीहरुलाई थाहा हुन्छ । त्यसपछि ती केटीका साथीहरुले पनि तपाइँलाई साथी बनाउन थाल्छन्, भेटेर होस् वा सोसल साइट मार्फत होस् । तर उनले आफ्ना केटी साथीहरुलाई तपाइँसँग पाँच मिनेटभन्दा बढि कुरा गर्न भने दिनेछैनिन् । उनका साथीहरु आफुसँग नजिकिए भने बुझ्नुहोस् की तपाइँलाई उनले मन पराइसकिछिन् ।
५. जतिखेर पनि फोन उठाएमा मध्य दिन होस् वा मध्यरात । खाए पिएको समय जे होस् । यदि तपाइँले फोन गर्नुभयो भने उनले जवाफ दिइहाल्छिन् । उनी भोलि बिहान छिट्टै नउठी नहुने छ तर पनि रातभर तपाइँसँग फोनमा कुरा गर्न तयार हुन्छिन् भने त्यसले संकेत गर्छ की तपाइँलाई उनले माया गर्छिन् ।
६. भूपु प्रेमिकाहरुका बारेमा जान्न चाहेमा उनले तपाइँका भूपु प्रेमिकाहरुका बारेमा हरेक कुरा जान्न चाहन्छिन् । जसका कारण उनले तपाइँका मनपसन्द कुराहरु थाहा पाउन सकुन् । तर उनले ती भुपु प्रेमिकाहरुको बद्ख्वाइँ गरिरहन्छिन् । उनीहरुको बारेमा कुरा झिकिरहन्छिन् र भन्छिन्, ‘उनीहरुलाई छाड्नाले तपाइँको जिवन राम्रो भयो ।’
७. तपाइँको सुखमा साथ दिएमा तपाइँको जन्मदिन होस्, तपाइँका बुवा आमाको विवाहको एनिभर्सरी वा जागिरमा पदोन्नती तपाइँलाई भन्दा उनलाई बढि चासो तथा खुसी हुन्छ । तपाइँको खुसीमा उनी कति धेरै खुसी हुन्छिन् भन्ने कुरा उनले सधै देखाउन चाहन्छिन् ।
८. तपाईंलाई हरेक कुरामा साथ दिएमा यदि तपाइँले उनीसँग भेट्ने योजना बनाउनुभयो भने उनले तपाइँ भेट्ने भनेको ठाउँमा आउनुहुन्छ की नाइ भन्ने कुराको एकिन गर्न तिन पटक सम्म जाँच गर्छिन् । पाँच मिनेट अगाडि मात्र भेट्ने कुरा थाहा भएमा पनि उनले सबै कुराको टुंगो गरिसकेसम्म राम्रो ड्रेसमा सजिएर आउँछिन । तपाइँलाई खुसी पार्न उनले ड्रेसमा कुनै कम्प्रोमाइज गर्दिनन् ।
९. तपाइँको दुखमा साथ दिएमा तपाइँ त’नाव तथा
चि’न्तामा हुनुहुन्छ । दिनभर नै तपाइँलाई दिक्क लागिरहेको छ भनेपनि तपाइँको मुहारमा खुसी भर्नका लागि उनी जेसुकै गर्न तयार हुन्छिन् । तपाइँ ठीक नभएसम्म उनले आराम लिँदिनन्
१०. तपाईंका हरेक कुराको याद राखेमा उनले तपाइँले भनेका हरेक कुरालाई ध्यान दिएर सुन्ने मात्र होइन तपाइँले उनीसँग गरेका साना भन्दा साना कुराको वृतान्त पनि याद गर्छिन् । चाहे तपाइँले मदिराको न’शामा मद्यरातमा उनीसँग टेलिफोनमा गरेको जन्मदिनको उपहार बारेको कुरा किन नहोस् ।
११. अरु केटीको कुरा गर्दा असहज भएमा यदि तपाइँले अरु कुनै केटीलाई इंगित गर्दै त्यो केटी राम्री छे भन्नुभयो भने उनको अनुहार तत्कालै अमिलो हुन्छ । उनले त्यसपछि तपाइँलाई लेक्चर सुनाउन थाल्छिन् । एक घण्टा नै किन नलागोस् विभिन्न उदाहरण तथा दृष्टान्त दिएर तपाइँले राम्रो भनेको केटी यस अर्थमा ख’राब छ भन्ने पुष्टि गरेरै छाडि्छन् ।
आफूले मन पराएको केटी रोज्ने र उनैसँग जीवन बिताउने सपना प्राय सबै छोरा मान्छेले देखेकै हुन्छन् । केटाले सकेसम्म केटीलाई आफूतिर आकर्षित गर्न आफ्ना कुरा गर्ने तरिका तथा आफू प्रस्तुत हुने तरिकाका बारेमा सजग हुनु जरूरी हुन्छ । यसको पुरा जानकारी हामीले माथी दिईसकेका छौ ।
प्रकाशित मिति २ श्रावण २०७८, शनिबार १०:२४